Kuleli zwe lanamuhla, e yethu umphakathi umthengi, izimpahla kanye nezinsizakalo emakethe ithatha isikhundla cishe evelele. Ngakho, mhlawumbe kufanele kube, ngoba ngamunye ngokwawo anikela njengamandla awo ukuthenga izimpahla ezehlukene kanye nemisebenzi ngoba ekujabulela ukuyibona. Futhi cishe njalo izimpahla kanye nezinsizakalo - aphelele, hhayi ezingqubuzanayo imiqondo. Ngezinye izikhathi interpenetrating.
Ngaphansi lo mqondo bona umkhiqizo zomsebenzi, okuyinto ngokuyinhloko has a izindleko. It is basakaza emphakathini ngezindlela ezihlukahlukene (bethenga, bethengisa, exchange), futhi-ke, lwamasheya luzokwenziwa. Noma kunjalo kuyinto utho, umkhiqizo has a ifomu impahla, kokubusa into, okuyinto ehilelekile ubudlelwane emakethe "umthengi nomdayisi". Akanawo izinga ingokomoya njalo kuhlobane ngokuqondile ezibonakalayo ezenziwa ngokungakhathali.
Yonke imikhiqizo zihlukaniswe ikakhulu ngamaqembu amabili:
"A" - nokuba angasetshenziswa ezimbonini;
"B" - umthengi.
ukukhuluma Cishe, iqembu lokuqala imikhiqizo esetshenziselwa umkhakha futhi ukukhiqiza, kanti owesibili, kunalokho, ukuze ukusetshenziswa siqu. Ukudala kwezidingo zamaqembu Ukukhetha yokufakelwa elilodwa phezu kweminye ngokuvamile kuholela nemiphumela eyinhlekelele. Ngokwesibonelo zomlando: ekuqaleni "yokwakha kabusha", lapho okuthiwa uBrezhnev zigoqiwe imodeli kwezomnotho ligxile ukukhiqizwa kwezimpahla "A" iqembu. Sonke khumbula emashalofini ezingenalutho ezitolo nokuntuleka Imininingwane ukudla ngisho eziyisisekelo, ukuthengisa ngaphansi counter, ukuphola! Ngokuvamile, umphakathi umthengi futhi kufanele yakhelwe ukukhiqizwa iqembu umkhiqizo "B", okuyinto futhi kunezinhlobo eziningana.
imikhiqizo ezingokoqobo isetshenziswa ngokuphindaphindiwe ngumthengi. Ngokwesibonelo, izinto zasendlini, noma oluqinile izincwadi noma ifenisha, izinto zokuhlobisa nezingubo.
Izimpahla ukusetshenziswa short-term
imikhiqizo ezingokoqobo esetshenziswa yesikhathi esisodwa noma ngezigaba eziningana. Ngokwesibonelo, ukudla noma amaphephandaba, omagazini.
Imikhiqizo ukuthenga ngokuvamile, ngaphandle kokuthi, ngaphandle umzamo eziqhathanisa nomunye. Ngokwesibonelo, ushukela, usawoti, okusanhlamvu, amafutha sunflower, insipho, olufana.
Izimpahla wathenga ngokuqhathanisa ukuba umthengi ku nenqubo ye izinga, intengo, ukutholakala. Ngokwesibonelo, izinhlobo ezahlukene izinto zasendlini, futhi tableware, noma ukudla okuthile.
Izimpahla for yokufuna okuyinto umuntu uchitha umzamo othe xaxa. Ivame uphawu imikhiqizo, kuqala emakethe lanamuhla. Ngokwesibonelo, imoto "Mercedes" noma ikhamera "Nikon".
Imikhiqizo libhekene ngezinga elithile "elite", lapho umsebenzisi uyasho indawo yabo isitebhisi nomphakathi. Ngokwesibonelo, yezikebhe, izimoto lomqondo, izindlu. Ngazuza lolu hlobo izimpahla akuvamile ngamunye.
Ngokuvamile, futhi izimpahla kanye nezinsizakalo - uhlobo emakethe izinjini. imiqondo le ngokuvamile interpenetrating, bahambe nomunye. Futhi ukukhiqiza mazombe izimpahla namasevisi - isici isici imodeli yesimanje ezomnotho zomphakathi. Ngakho-ke, kokubili linendima ebalulekile emhlabeni ukusetshenziswa.
IMIKHIQIZO & SERVICES
Njengoba yayazi ukuthi lo mkhiqizo Manje ake sihlole welithi "inkonzo". Kusinda imisebenzi ehlukene ungawakhi umkhiqizo (entsha, hhayi ngaphambili yayikhona), njengoba ukuguqulwa izinga imikhiqizo ekhona. Evamile, kukuhle, ukuthi asitholakali umthengi ngesimo wangempela, kodwa ngesimo noma yimuphi umsebenzi. Lokhu yasekhaya, ezokuthutha, izinsizakalo zomphakathi. Lokhu kuqeqesha, imithi yokwelashwa, kwezamasiko kanye nezemfundo, zonke izinhlobo iseluleko, ukuhlinzeka zonke izinhlobo zolwazi, kucocisana ekuqhubeni zebhizinisi kanye nezivumelwano. Izimpahla kanye namasevisi ababonakali ngezikhundla ikakhulu: owokuqala - into ethize unohlobo impahla, kwesibili - uhlobo umsebenzi, zithengiswa.
Incazelo kanye ngezigaba
umsebenzi ebhizinisi, okuhloswe ngalo yalokho - kweneliseke izidingo ezahlukene abanye - wabiza inkonzo (isibonelo, okungenani ngokomthetho). It libhekene ngqo okuhloswe ngaso abathengi, has nolimi emthonjeni. amasevisi okuqondiwe zihlukaniswe impahla, kanye usikompilo nenhlalo.
Material - ukuhlangabezana nezidingo umthengi ngabanye. Ngokwesibonelo, ukukhanda ezihlukahlukene imikhiqizo, ngezidingo, ukudla kanye ezokuthutha.
Ezenhlalo nezamasiko - ukuhlangabezana ezingokomoya, yengqondo ebhaliwe, izidingo zomuntu, ukuqinisekisa nokugcina impilo yakhe, ekuthuthukiseni amakhono e imisebenzi ehlukahlukene. Ngokwesibonelo, amasevisi amasiko, ezempilo, ezokuvakasha kanye nemfundo. Futhi namhlanje, izimpahla kanye namasevisi ngakho okwakuthandelene ukuthi isevisi izenzo njengendlela lezimpahla. Isibonelo - ahlukahlukene ukuqeqeshwa isiqophi izifundo, master emakilasini. Ziyakwazi bayanda ekubeni izimpahla ezinkulu virtual!
Izinhlelo Imininingwane kwezomnotho
Oligopoly emnothweni - Iyini? Indima oligopolies emnothweni yesimanje Russian
Izifunda Italy. "Spicy" uthando ngezebhizinisi
Icon "Kufanelekile" Yomama KaNkulunkulu. Okushiwo i-Icon nomthandazo
Maka kanye elingenamikhono izingalo Tambov: umlando, incazelo, amaqiniso athakazelisayo
Inzalo encane yenkukhu: incazelo, incazelo, okuqukethwe kanye nokubuyekezwa